Horudhac: Wax walba aad uga baahan tahay kulanka adag ee dhex mari doono kooxaha Dekedaha Iyo Horseed – Gool FM
Dajiye January 29, 2020
(Muqdisho) 29 Jan 2020. Dhamaan indha Mucaashaqiinta kubadda cagta ayaa waxey galabta ku sii jeedaan Garoonka Eng Yariisow Stadium, kaas oo ka dhici doona kulanka ugu weyn ee horyaalka Somali Premier League.
kooxaha Dekedaha Football Club iyo Horseed Sports Club ayaa galabta ku balansan Garoonka Eng Yariisow Stadium, ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League, fasal ciyaareedkan 2019-20.
kani waa kulanka ugu xilfaltanka adag maadama labadan kooxood ay yihiin kuwii sanadkii la soo dhaafay ku dagaalamayay horyaalka, inkasto Dekedaha ay ku guuleysteyn horyaalka halka kaalinta 2-aad ay gashay kooxda cawo iyo maalin ee Horseed.
Shantii kulan ee ugu dambeysay ay labadan kooxood isku arkaan horyaalka Somali Premier League labo kamid ah waxaa badisay Horseed halka saddexda kulan kale ay dhibcaha kala qaateyn, taas oo ka dhigan in Horseed ay ka i taal roon tahay kooxda Dekedda, marka aan ka shidaal qaadano shantii kulan ee ugu dambeysay ay is arkeen.
Kooxda kubadda cagta Dekedda kulankii ugu dambeyay ay horyaalka ka dheeshay waxey ka soo adkaatay naadiga Jazeera Sports Club, halka naadiga cawo iyo maalin ee Horseed ciyaartii ugu dambeysay ay soo kala dirtay wiilasha Rajo.
Wiilasha Dekedaha kulan ciyaareedkan waxaa dhaawac ugu maqnaanaya daaficeeda birta ah ee Idiris Aamiin Cali, kaas oo kulamadii ugu dambeyay ka maqnaa kooxdiisa.
kulankii ugu dambeyay ay labadan kooxood is arkan horyaalkii la soo dhaafay waxey ku kala baxeen barbaro 1-1, ciyaar dhacday 20-06-2019.
Horyaalka waxaa hogaamineysa kooxda Dekedaha waxeyna leedhahay 13-dhibcood halka Horseed ay leedhahay 11-dhibcood, taas oo ka dhigan hadii ay Horseed adkaato iney hogaanka horyaalka ku qaban doonto 1-dhibcood, balse Dekedaha oo adkaata waxey ka dhignaan doontaa in ay sii dheereystaan hoggaanka horyaalka, waxeyna tagi doonaan 16-dhibcood.
Wiilasha Horseed sanadkii la soo dhaafay waxey ku guuleysteen koobka xiisaha badan ee General Daa’uud, iyago ka qaaday kooxda Mogdisho City Club.
Tababare Cabdi Joon ayaa ka nasiib badan macalin Yuu Cali, markaan sidaas ku leeyahay waxaan kala jeeda kulamadii ugu dambeyay ay is arkan labadan shaqsi ee kala hogaamiya Dekedaha iyo Horseed in Tababare Cabdi Joon oo 7-dhibcood ka heesto dhigeesa Yuu Cali tartamada oo dhan.
Haddaba Muuqaalka hoos ka daawo Ogeysiiska ciyaarta iyo xaqiiqooyin aad u baahan tahay inaad ka oggaato kulankan: